Friday January 17, 2020 - 17:29:52 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa markale duqeyn dad shacab ah lagu dilay ka fuliyay deegaan katirsan gobolka Sh/hoose ee dhaca Koonfurta Soomaaliya.
Duqeyn shalay ka dhacday deegaan dhaca halka ay iska galaan gobollada Jubbada dhexe iyo Sh/Hoose ayaa sababay dhimashada hal qof shacab ah iyo burbur gaaray gaari uu watay.
Ilo wareedyo ayaa xaqiijinaya in duqeynta lagu beegsaday gaari ka amba baxay deegaanka Kuunya Barroow kunasii jeeday deegaanka Araboow ee Jubbada dhexe, diyaarad dagaal oo ay leedahay dowladda Mareykanka nooca loo yaqaan Drone-ka ayaa duqeynta geysatay.
Ninka duqeynta lagu dilay ayaa lagu magacaabi jiray Cabdu Qaadir Bakar Malaaq oo caan ka ahaa Sh/Hoose, dad ku sugan meel 40 KM ujirta Kuunya Barroow ayaa sheegay in ay goobta duqeyntu ka dhacday kasoo aruuriyeen meydka Cabdu Qaadir Malaaq oo si xun ukala go'ay.
Illaa sedax gantaan ayay diyaaraddu laheshay gaariga taas oo sababtay in gabi ahaanba uu uburburo gaariga uuna dhinto qofkii la socday, war qoraal ah oo kasoo baxay taliska ciidanka Mareykanka AFRICOM ayuu ku sheegtay mas'uuliyadda duqeynta balse cidda uu dilay ayuu ku sheegay dagaalyahanno Al Shabaab arrinkaas oo ah been uu qiil ugu yeelayo gummaadka shacabka.